China Gratour V5 fekitori uye vagadziri | Foton
Zvese zviri pasi pesimba
Rudzi rwemuviri 1640
Rudzi rwemafuta Peturu
Inside Saizi 2300 * 1450 * 1280
Inotorwa kubva kuEuropean zano rekugadzira, dhizaini dhizaini uye chitarisiko chinosanganisira pfungwa yekuchengeteka. • Yakasarudzika pamberi kumeso kuumbwa, ichigonesa kugadzikana uye chic pfungwa.
Injini dzakazvimiririra dzakagadzirwa neFoton
Tora Hunhu: 16V + DOHC + MPFI
Kurohwa (mm): 79
Kubvisa (L): 1.206
3 kutenderera kweCAE simba kuongorora uye kugadzirisa, ichisimbisa yakavimbika mashandiro eakaomesesa chassis zvikamu; Yese yakavimbika mota bvunzo uye nadzurudzo, ichigonesa iyo hwese hupenyu hupenyu hwemakore gumi-kana mazana mazana maviri emakiromita
Yakagadziriswa muviri dhizaini
8-muchinjikwa nhengo furemu dhizaini, ichigonesa yakanakisa kukanganisa kuramba Kuenzaniswa neyakajairika mini-bhazi, furemu muchinjikwa-chikamu chikamu chakakwira ne10%, simbi sheet sheet ukobvu yakawedzera ne20%; 58% yefuremu yakagadzirwa nesimbi yakasimba.
Rear drum brake, kuverengera iyo max braking ye
Inotyaira nzvimbo inoshandisa yekutengesa chikamu dhizaini, yakagadzikana kuumbwa. Footboard inokusunungura kubva parwendo vhiri.
Matanho emukati maviri-epakati, anosanganisira iko kunzwisa manzwiro emutyairi wemota 13 nzvimbo dzekuchengetera, zvinotungamira mune zvakafanana zvigadzirwa.